Naagta sida ugu fudud ay ku biyabbixi karto
» Naagta sida ugu fudud ay ku biyabbixi karto
Qaabka koowaad ee galmada ee dumarku giriirka ka qaadaan waa midda bahalku uu xoog u garaayo qankiirka kintirka hoostiisa ku yaallo xaaskaaga gadaal ayaad kaga imaanaysaa adiga oo farjiga uga galmoonaya iyadoo jiifta adiguna jilbaha ayaad ku istaagaysa, lugaheeda kor ayaad u taagaysaa. Markaad dhinacaan ka marayso ha iloobin inaad hoosta barkin ka geliso. markaad dhinacaan ka marto jirkeedu waxa uu soo daynayaa dheecaano fara badan kuwaaasoo aad ku arkayso inay kasoo burqanayaan xubinteeda taranka. Qaabka labaad ee isaguna muhiimka ah waxaa weeye inay xaaska dhabacan u seexato adigana gadaal ayaad uga imaanaysaa. markaad dhinacaan ka marayso ha iloobin inaad barkin u galiso gumaarka ama caloosheeda qeybta hoose. dumarka hadii qaabkaan loogu galmoodo waxaa lagu yaqaan in dhidid jirkooda kasoo duxo mida kale waxay dareemaan kacsi nooca ugu sareeya riinkoodana meel fog ayaa laga maqlaa.
Qaabka sadexaad ee aan halkaan idin kugu soo bandhigayno waxaa weeye in ninka fariisto oo iyaduna waa ay kaa koranaysaa howshana waad isla wadaysaan. ku ciyaar oo taa-taabo naaseeheeda waxay ugu fiican marka leedahay futo weyn iyo naaso waaweyn ib dheer leh iyo barideeda si dareenkeedu u sii xoogaysto markaad halkaas marayso waxaad arkaysaa iyadoo macaan dartii la ooynaysaa, si xoog badanna way u biyabbaxaysaa
Anonymous4/30/2014naagta waxay ku biyabixi kartaa kintirka in si xoog riixoReplyDeleteAnonymous4/30/2014walalo naagaha way ku kala duwan yihiin anigu waxan aqaan gabar saaxibtayda ah foorara ayay ku biyabaxdaaReplyDeleteAnonymous6/23/2016haye adigana maxaa ku biyo baxdaaReplyDeleteAdd commentLoad more...